३५ बर्सिय आ’न्टीलाई घुम्न जानी र फेसबुकमा बोल्ने केटा साथीको खोजी, चाहाना हुनेले यसरि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस
March 18, 2022 AdminLeaveaComment on ३५ बर्सिय आ’न्टीलाई घुम्न जानी र फेसबुकमा बोल्ने केटा साथीको खोजी, चाहाना हुनेले यसरि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस
यो खबर सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न पनि सक्छ । दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ रु अर्थात्त्र हो तरु श्रीमान् पैसा कमाउनको लागि विदेशमा हुने आफ्नो श्रीमानको साथ र माया नपाउने असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ।
उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू आन्टीहरूसँग फस्नुका कारण अनेक छन्।कसैका लागि यो एकप्रकारको रोजगारी हो कसैका लागि आर्थिक संकट हल गर्ने उपाय। अनि कसैका लागि परिपक्व महिलासँग देहयात्राको आनन्द। यस्तो सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्ति किन बढ्दै छ समाजमा अनि यसका जटिलता के के हुन्रु अम्मर जिसीले केलाउन खोजेका छन्। केस नं १ काठमाडौँका २३ वर्षीया हरी परिवारले बिहेको कुरा झिक्यो कि सुइँकुच्चा ठोक्छन्।
अरू विषयका पारिवारिक छलफलमा उनी सहभागी हुन्छन्। तर बिहे भन्नासाथ उनको सातो जान्छ।कारण उनी आफूभन्दा झन्डै दोब्बर उमेरकी महिलासँगको प्रेममा फसेका छन्। एक प्रहरी निरीक्षककी ४२ वर्षीया श्रीमतीको माया प्रेममा परेका हरीलाई अहिले यो सम्बन्ध निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ। भन्छन् पहिले बिहे भएको र दु दुइटा छोराकी आमा हो भन्ने थाहै भएन। आँखा चिम्लेर लभ गरियो। अहिले उम्किनै गाह्रो भाछ।
उनका श्रीमान् प्राय घरबाहिर कामको सिल्सीलामा हुने र उनको खासै श्रीमतीको लागि समय नदिने हुदा उनी आफूसँग लहसिएकी हरी बताउँछन्। मैले छुँदामात्रै पनि मक्ख पर्छिन् उनले भने मैले हेरेको छोएको साह्रै मन पर्छ रे। मसँग टाँसिरहन खोज्छिन्। त्यसैले मैले पनि उन लाई छोड्न सकिरहेको छैन। मलाई मर्का पर्दा सहयोग पनि गर्छिन्। ति आन्टीले उनलाई करिब साढे तीन वर्षमा सात लाख रुपैयाँ सहयोग पनि दिईसकेको उनी सुनाउछन।
राजधानीमा सभ्य बन्दै फागु पूर्णिमा पर्व, कुन देशमा कसरी मनाइन्छ फागु ?
दुर्गेशको बयान : बार्गेनिङ थाहा छैन, करणी गरेको भए कारबाही हुनुपर्छ भनेको हो
कठै ! यो कस्तो रोग लाग्यो , मलाई बचाउनुहोस् म बाच्न चाहान्छु (हेर्नुस् भिडियो )